NEWS: DowladaSoomaaliya Miyay ka qeyb galeysaa Shirka Israel & Afrika & Dalal badan oo diiday….. - Hablaha Media Network
NEWS: DowladaSoomaaliya Miyay ka qeyb galeysaa Shirka Israel & Afrika & Dalal badan oo diiday…..
HMN:- 23ka bisha Oktoober ee sanadkan ayaa lagu wadaa in dalka Togo ee galbeedka Afrika ka dhaco shirweyne ay isugu imaanayaan Dalalka Afrika iyo Israel, shirkaasi oo ay dooneyso Israel inay ku balaariso xiriirka ganacsiga iyo diblumaasiyeed oo ay la leedahay Qaarada Afrika.
Shacabka Falastiin ayaa si weyn uga soo horjeeda in Israel lagu soo dhaweeyo dalalka Afrika maadaama Israel ay xoog ku heysato dhulka Falastiin, waxayna ugu baaqeen dalalka Afrika inay qaadacaan shirkaasi la filayo inuu ka dhaco dalka Togo.
Dhowr dal oo Afrikaan ah ayaa horey ugu sii dhawaaqay inaysan ka qeyb geli doonin shirkaasi, waxaana kamid ah dalalka; South Africa, Morocco, Algeria, Tunisia iyo Mauritania.
Shirkan oo ah midkii ugu horeeyey oo noociisa ah oo dhexmara Israel iyo dalalka Afrika, ayaa waxaa si weyn ugu ololeenaya inuu qabsoomo Raysalwasaaraha Israel Benjamin Netanyahu.
Dalalka Afrika ayaa horey xiriirka ugu jaray Israel kadib dagaalkii 1973dii, balse Netanyahu ayaa noqday hogaamiyihii ugu horeeyey ee Israel oo booqda Qaarada, waxayna tani qeyb ka tahay dadaalka ay ugu jiraan isra’iliyiinta inay saaxiibo ku yeeshaan qaarada Afrika.
Israel ayaa xiligan dhumisay taageeradii ay ku lahaan jirtay Golaha Loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay (General Assembly), dalalka xubnaha ka ah UN-ka oo gaaraya 193 wadan ayaa intooda badan taageeray madax-banaanida shacabka Falastiin.
Soomaaliya oo kamid ah dalalka aan wax xiriir ah lalahayn Israel ayaan weli ka hadlin inay ka qeyb geli doonto shirka Togo ee lagu casumay wadamada Afrika.
Sanadkii hore ayey soo baxeen warar sheegaya in xiriir hoose uu dhexmaray Madaxweynihii hore Xassan Shiikh Maxamuud iyo Benjamin Netanyahu sida ay qoreen qaar kamid ah jaraa’idka laga leeyahay Israel.
Qorshaha Israel ayaa ah in ay dalalka Afrika kusoo jiidato inay ka caawin doonto dhanka is-dhaafsiga Teknolojiyada, tababarada amniga iyo ganacsiga. Isra’iiliyiinta ayaa horey loogu eedeyn jiray iney qeyb weyn ka ciyaaraan suuqa madow ee khayraadka Afrika sida Dheemanka dunnida loo iibgeeyo.